Macluumaadka Shirkadda - Mashiinno isku toosan
Mashiinno Iswaafajiyay waxaa laga helay 2004, oo ku taal magaalada caalamiga ah ee Shanghai, oo leh shan shirkadood iyo warshado. Waa shirkad tiknoolajiyad ku saleysan oo isku dhafan R&D, soo saaridda iyo suuqgeynta iyo adeegyada la xiriira ee mashiinnada pharma iyo makiinadaha wax lagu duubo, iyo baaxadda ugu weyn ee laga helayo waa khadka oo dhan ee qalabka diyaarinta adag iyo xallinta filimka afka lagu kala firdhin karo, iyo sidoo kale xalka geedi socodka xaddiga xaddiga daawada. .
Ku adkaysiga hal-abuurnimada ayaa horseed u ah horumarka aan kala go 'lahayn ee Aligned. Tan iyo markii la aasaasay shirkadda, Aligned waxaa ka go'an adeeg hal-joog ah oo loogu talagalay qalabka pharma & xirxirida iyo mashruuca injineernimada dawooyinka, abuurista nidaam maareyn saynis ah oo adag. Marka loo eego hagida mashruuca EPCM, Aligned wuxuu ku dhex maray dhammaan mashaariicda qaab qaadasho adag iyo khadka dareeraha ee afka si guul leh suuqyo badan.
Iswaafaqsan ayaa had iyo jeer culeys saareysa adeegyada isku-dubbaridan, taas oo gacan ka geysaneysa dhisidda xiriir aamin leh macaamiil badan Iyada oo ku saleysan teendhada "sumcadda, hal-abuurnimada horumarka; adeegga iyo daacadnimada in la dhiso summad", iyadoo la raacayo qiimaha "Si loo gaaro macaamiisha iyo shaqaalaha", Aligned wuxuu sii wadaa inuu hagaajiyo nidaamka maaraynta adeegga iyo dhisidda koox aqoon leh, marka loo eego farsamada la-talin, Cilmi-baaris iyo horumarin, qaabeyn, si loo bixiyo xirfad-yaqaan, shaqsiyeed, kala-duwanaansho, cimilo dhan, iyo adeegyo istiraatiijiyadeed oo dhan marka la eego soo-jeedinta xalka, soo-saarka, ka-goynta, tababarka iyo adeegga iibka kadib.
Meelaynta alaabada la waafajiyay waa mid caalami ah, oo leh shabakad macluumaad badeecad ballaaran leh, iyo la-hawlgalayaal caalami ah. Iyadoo aan loo hoggaansamin mabaadi'da hufnaanta, mas'uuliyadda, hal-abuurka iyo barashada, wax soo saarka Aligned si wanaagsan ayaa loo iibiyaa loona dhoofiyaa in ka badan 120 waddan & gobollada adduunka oo dhan, Ig. sumcad sumcad leh, Pfizer, Bayer, Guilong, Pigeon, Unilever, Lipin, Langsheng, Remedy group, Albion, iwm, ku raaxeysanaya sumcad saameyn leh iyo xaqiijin ay ka heleen shirkado badan oo dawooyinka caan ku ah dalka iyo dibaddaba.
Marka laga hadlayo kaamil ahaanta gudaha ee shirkadda, waxaa ku xiga "Soo-saaridda – Soo-saaridda – Xakamaynta Tayada Teknolojiyada- Maareynta Bakhaarka – Adeegga Iibinta-Aftersales".
Marka laga hadlayo isdhexgalka suuq geynta, waxaa lagu macnayn karaa "Users – Market – Dealer – Enterprise"
Xagga cilaaqaadka, waxaa loo kala saari karaa "Qofka iyo Asxaabta - Qofka iyo Hogaamiyaasha –Qofka iyo Macaamiisha - Qofka iyo Suuqa –Qofka iyo Bulshada".
Guud ahaan, laba qodob oo lagu jiheeyo hal xariiq, waxay tusineysaa isticmaalka tamarta ugu hooseeya ee fiisigiska, masaafada ugu yar ee xisaabta, isku xirnaanta qurxinta, fikradda la aasaasay ama runta muddada gaaban ee falsafada iyo isku dhafka ugu dhow. Ingiriisiga, "Aligned" waxay u badan tahay inuu xiriir la leeyahay natiijooyinka ugu dambeeya. Laakiin marka la joogo Shiinaha, la safan, runtiina waxa loo wajahayaa geeddi-socod: "Bini'aadam iyo Dad, Dad iyo Unug, Dad iyo mashiin, Dad iyo Bulsho, Dad iyo Dabeecad, Shirkad iyo Shirkad iyo Koox iyo koox waa koox ka mid ah is-dhexgalka - Coadjutant – Synergistic– Gacan sharaf leh ".
Sidaa darteed, waxaan jecelahay inaan muujiyo ra'yigayga ku saabsan deeq-siinta "Iswaafajin" macne cusub oo ku saabsan dhaqanka Shiinaha:
Sannado badan oo horumarin ah, Mashiinnada Isku-xidhka ahi waxay aasaaseen shabakad wadaag ah in ka badan 11 waddan, mashiinno loo dhoofiyo in ka badan 60 waddan, waxay ku dhammaystireen in ka badan 10 mashruuc dhammaystiran oo dhammaystiran iyo inay si ballaadhan u galaan suuqyada dawooyinka, kiimikada, qurxinta, cuntada, iyo wixii la mid ah .
Waxaa lagu aasaasay magaalada Shanghai sidii ganacsade ku takhasusay mashiinada phamaceutical.
Kooxda Aligned Group Hongkong ayaa la aasaasay oo ka qayb qaadatay mashaariicda Turnkey.
Ruian Technology Co. ayaa la aasaasay oo bilaabay inuu sameeyo R&D iyo soosaarida mashiinada.
Waxaa loo iibiyay 156 dal iyo in ka badan 300 isticmaaleyaasha adduunka ugu dambeeya.
Waxaan diiradda saareynaa mashruuca Spain, Indonesia & Algeria, oo sidoo kale ku sii fidaya suuqa Yurub iyo Ameerika.
Iibka sanadlaha ah ayaa ka badan USD10 milyan, Mashruuca Yemen, Tansaaniya oo socda